१५२ वर्षपछिको विशेष चन्द्रग्रहण आज, ग्रहण राहु केतुले पीडित, कुन राशीले के गर्ने के नगर्ने ? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
१५२ वर्षपछिको विशेष चन्द्रग्रहण आज, ग्रहण राहु केतुले पीडित, कुन राशीले के गर्ने के नगर्ने ?
डिसी नेपाल , १७ माघ २०७४
काठमाडौं। जनवरी महिनाको अन्तिम दिन आज लाग्न लागेको खग्रास चन्द्रग्रहणमा सूर्य र चन्द्रमा दुवै राहु केतुले पीडित भएको ज्योतिषीहरुले बताएका छन् । यसको अशुभ असर सबै राशीहरुमा पर्नेछ । नक्षत्रका कारण केही व्यक्तिलाई बढी प्रभाव पर्नेछ भने केहीलाई कम । ग्रहणका कारण धेरैजसो मानसिक रुपमा चिन्तित रहनेछन् र गलत फैसला लिन सक्नेछन् । राहु केतुका कारण मनमा डर उत्पन्न हुनेछ । यसकारण महिनाको अन्तिम दिन होसियार रहनु जरुरी छ ।
कुन राशीले के गर्ने के नगर्ने ?
मेषः यो राशी हुनेहरुले जरुरी काम हिम्मत र आत्मविश्वासका साथ गर्न सक्नेछन् । काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । केही त्याग पनि गर्नु पर्नेछ । काम पूरा गर्नको लागि खर्च बढ्नेछ । केही गोप्य सूचना पनि पाउन सक्नुहुनेछ । यो राशी हुनेहरु कम बोल्नुहोला र आफ्ना गोप्य कुरा नखोल्नुहोला । अनावश्यक विवादबाट टाढै रहने कोसिस गर्नुस् । अल्झिएका कुरामा आफूलाई नफसाउनुहोला । कुराकानीमा विवाद हुन सक्छ । निराशाको स्थिति आउन सक्छ । प्रेम प्रसंग, पारिवारिक जिम्मेवारी र कार्यालयका काममा अचानक बाधा आउन सक्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुन सक्छ । परिवारका कुनै सदस्यको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ ।
के गर्ने: एउटा गुलाब दिनभर आफूसँग राख्दा केही राम्रो हुनेछ ।
वृषः आर्थिक कामहरु आज गर्नुहोस् फाइदा हुने योग छ । अनावश्यक खर्चबाट बच्न सकिनेछ । मनोरन्जनका कारण दिनचर्यामा परिवर्तन हुनेछ । केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् धेरै हदसम्म सफल हुन सक्नुहुनेछ । धनलाभ हुनेछ । सावधानीसँग दिन बिताउनुहोला । अनावश्यक विवादबाट बच्नुहोला । वाहन प्रयोगमा सावधान रहनुहोस् ।
के गर्ने: कार्यालय र घरमा पहेंलो रंगका फूल राख्नुहोस् ।
मिथुनः चन्द्रमाको स्थिति लाभदायक हुनेछ । घरमा धेरै समय दिनुपर्ला । परिवारको लागि केही त्याग पनि गर्नुपर्ला । प्रेम सम्बनधको लागि राम्रो समय छ । दिन राम्रो रहनेछ । खुसी प्राप्त हुनेछ । सोचेका काम पूरा हुनेछन् । भविष्यमा हुने फाइदाको संकेत प्राप्त हुन सक्छ । तपाइँको कुनै सोख नै तपाइको लागि समस्याको कारण बन्न सक्छ सावधान रहनुहोला । सोखमा पैसा समय र उर्जा खर्च हुनेछ ।
के गर्नेः रातो पहेंलो रंगको पर्दा, बेडसिट वा टेबलपोस प्रयोग गर्नुहोला ।
कर्कट : पुराना समस्या सकिनेछन् । सन्तान र घरपरिवारको विषयमा सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्छ । इष्टमित्रसँग महत्वपूर्ण सरसल्लाह हुन सक्छ । लगानीको योजना बन्न सक्छ । नयाँ सम्बन्धीसँग सम्बन्ध गहिरो हुनेछ । सकेजति लगानी गर्नुहोसर नक्षत्रले शुभफलको संकेत गरेका छन् । जीवनसाथीसँग भने मतभेद हुन सक्छ । साझेदार र परिवार सहयोगको लागि पछि हट्न सक्छन् ।
के गर्नेः रातो वा गुलाबी फूल घर र कार्यालयमा राख्नुस् ।
सिंहः बिना योजना ठूलो काम हुन सक्छ । सम्बनधमा अचानक ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । मनको कुरा खोल्ने र रिसाएकालाई फकाउने समय छ । मनमा उत्साह आउनेछ । रोजगारी बदल्ने सोचाइ पनि आउन सक्छ । आज आफ्नो लागि अवसर खोज्ने प्रयास गर्नुहोला । खर्च बढ्नेछ । फोनमा अफिसमा र बाहिर कुराकानीमा धेरै समय खर्च हुन सक्छ । सोचेका काम पूरा हुनै लाग्दा अचानक रोकिन सक्छ । साथीहरुसँग मनमुटाव हुन सक्छ ।
के गर्नेः सेतो वा पहेंलो फूलालाई बेसारपानीमा भिजाएर लक्ष्मी देवीलाई चढाउनुहोस् ।
कन्या : कामको योजना राम्रोसँग बनाउनुहोला । साथहिरुको सहयोग प्राप्त होला । पुराना मित्रसँग पनि भेटघाट हुनेछ । जीवनसाथीसँग घुमफिरमा जाने योग छ । अविवाहितलाई बिहे वा प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ । व्यवसाय बढ्नेछ । अचानक फाइदाको योग छ । आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्ने मन हुन सक्छ । जोश र हतारमा काम गर्दा कठिन परिस्थितिमा फस्न सक्ने योग छ । सावधान रहनुहोला ।
के गर्नेः एउटा जवाकुसुम (घण्टीफूल) आफूसँग राख्नुहोस् ।
तुला : भाग्यले साथ दिनेछ । रुकिएका काम छिटै पूरा हुन सक्छन् । लामो समयदेखि सोच बनाइएका काम गर्नुहोस्, लाभ हुनेछ । कुनै बोझबाट मुक्ति पाइनेछ । अचानक आय बढ्नेछ । अल्झिएको स्थिति सुल्झाउन सकिनेछ । धार्मिक कार्यमा मन जानेछ । काममा सावधानी अपनाउनुहोला । तपाइको विचारले उच्च अधिकारी रिसाउन सक्छन् । पारिवारिक झमेलाको सामना गर्नु पर्ला । नजानिँदो डर उब्जनेछ ।
के गर्नेः ५ सेता फूल नदी वा तलाउमा हाल्नुहोस् ।
बृश्चिकः चन्द्रमा भाग्यको घरमा रहनेछ । साथीहरुसँग मिलेर नयाँ र सकारात्मक काम गर्ने योग छ । जीवनसाथीसँग राम्रो समय बित्नेछ । अविवाहितलाई विवाह वा प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ । परिवारमा बैचारिक मतभेद सकिनेछन् । आफ्नै तारिफ नगर्नुहोला । काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन नगर्नुहोस् । अदालती मामिलामा समस्या आउन सक्छ । विश्वास गरिएका व्यक्तिबाट धोका हुन सक्छ ।
के गर्नेः देवी मन्दिरमा मेहन्दी चढाउनुहोस् ।
धनुः करिअरमा परिवर्तन हुन सक्छ । यो षेत्रमा योजना पनि बनाउँदा वेस हुनेछ । स्थितिमा निकै सुधार हुनेछ । धन खर्च हुनेछ तर सही ठाउँमा खर्च हुँदा यो तपाइको लागि राम्रो पनि हुनेछ । नजिकका व्यक्तिको लागि केही त्याग गर्नुपरेमा संकोच नमान्नुहोला । जीवनसाथीसँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ । कामकाज भन्दा योजना बनाउन धेरै समय लाग्नेछ । मेहनत धेरै गर्नु पर्नेछ । कामअनुसार लाभ नहोला । नयाँ काम गर्ने निर्णय नगर्दा राम्रो होला ।
के गर्नेः घर र कार्यालयमा पानी राख्ने ठाउँमा फूल पनि राख्नुहोस् ।
मकरः कसैलाई दिएको पैसा आज फिर्ता हुन सक्छ । नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् । दैनिक काम सहजै पूरा हुनेछन् । विशेष व्यक्ति तपाइबाट प्रभावित हुनेछन् । कामबाट पदोन्नति पनि हुन सक्छ । दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुनेछ । वाहनसुख पनि प्राप्त हुनेछ । विवादमा समय बर्बाद हुन सक्छ । रिसका कारण काम बिग्रन सक्ने योग छ ।
के गर्नेः घर या कार्यालयको पूर्वतर्फको भित्तामा रातो फूल राख्नुहोस् ।
कुम्भः चिन्तित भएकाहरुलाई राहत मिल्नेछ । धनको बचत हुनेछ । सही समयमा सही ठाउँमा उपस्थित हुँदा रोकिएका काम अघि बढ्नेछन् । घर परिवार र छिमेकमा अप्ठ्यारो स्थिति आएमा सकारात्मक रहनुहोस् । बिहेको प्रस्ताव आउन सक्छ । दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुनेछ । खर्च बढ्नेछ । रोजगारीमा सफलता प्राप्त हुनेछ तर व्यवसायमा लाभ नहुन सक्छ । यात्रामा खर्च हुनेछ ।
के गर्नेः दक्षिण दिशामा पानमा घिउको दीप बाल्नुहोस् ।
मीनः अचानक धनलाभ हुन सक्छ । बनाएका योजनामा सफलता प्राप्त हुने योग छ । करिअरमा नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् । पुराना रोगबाट छुटकारा पाइनेछ । बोलीले अरुलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ । साथीभाइसँग समय बित्नेछ । कुनै झन्झटमा अल्झिने काम नगर्नुहोला । सामान्य घटनाले पनि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । साथीले धोका दिन सक्छन् । तपाइमाथि झूटो आरोप लाग्न सक्छ ।
के गर्नेः घर वा कार्यालयमा फूलवाला रुम फ्रेशनर प्रयोग गर्नुहोस् ।
वित्त आयोगको अध्यक्षमा पौडेल सिफारिस
राष्ट्रसंघीय शिविरमा आक्रमण हुँदा ८ जना शान्ति सेनाको मृत्यु
रामेछापमा बस दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु, २४ घाइते
सबै प्रदेशमा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
बाइक चलाउँदा हेलमेट नलगाए के हुन्छ? यो भिडियो हेर्नुहोस
हत्या गरिएका पोल्याण्डका मेयरको भावपूर्ण विदाई
बिक्नै छाडे चिनियाँ टेलिभिजन